इस्लामाबादबाट Semalt विशेषज्ञ स्प्याम अवरोधक के हो वर्णन गर्दछ
स्पाम अवरोधक अनावश्यक ईमेलहरूसँग डिल गर्न एक प्रभावकारी उपकरण हो। यो एन्टी स्पाम प्रोग्राम सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको स्प्याम फिल्टर प्रोग्रामहरू भन्दा फरक हुन्छ र केही सेकेन्डमै स्प्यामको बहुमतलाई रोक्छ। स्प्याम अवरोधकको प्रयोग गरेर, तपाईं सजिलै बेकार र स्पाम ईमेलहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। स्पाम अवरोधकले wan 85% अनावश्यक ईमेलहरूलाई ईनबक्समा भाइरस र अर्थहीन सन्देशहरू सहित पुग्न रोक्दछ। केहि स्प्याम ब्लकरहरू सेकेन्डमै 99 99% स्पाम मेटाउन सक्दछन्।
Semalt बाट एक अग्रणी विशेषज्ञ सोहेल सादिक , यहाँ स्प्याम ब्लकरहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे विस्तृत वर्णन गर्दछ।
स्प्याम ब्लक सफ्टवेयर र उपकरणहरू मेल सर्वर ईमेल खाताहरूको माध्यमबाट कार्य गर्दछ, स्प्याम ईमेलहरूको लागि खाताहरूको निरीक्षण गर्दै। स्पाम ब्लकरहरू दुबै भाईरस र शंकास्पद ईमेलहरू मेटाउँछन् र तपाईंलाई वयस्क छविहरू र सामग्रीबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, असुरक्षित मानिएको सन्देशहरू बल्क न्यूजलेटरहरू र प्रचारात्मक ईमेलहरू सहित सजिलै संगरोध गरिन्छ। ईमेलहरूलाई हटाएर तत्काल कार्यहरू लिन्छ, र यी कार्यहरू अनुकूलन फिल्टरि filter नियमहरू सिर्जना गर्न भण्डारण गरिन्छ।
कुन सुविधाहरू तपाईंले स्प्याम अवरोधकमा हेर्नु पर्छ?
जब यो स्प्याम ब्लकरहरू छनौट गर्न आउँदछ, तपाईं जहिले पनि प्रोग्राम खोज्नु पर्छ जुन तपाईंको ईमेल सेवासँग अन्य समान सफ्टवेयरको तुलनामा बढी मिल्दो छ। साथै, तपाईंले स्थापनाको सहजता, प्रदान गरिएको अवरोधको स्तर, र स्प्याम ब्लक प्रोग्रामहरूको लागत जस्ता कारकहरू विचार गर्नुपर्दछ।
एक स्पाम फिल्टर र एक स्पाम अवरोधक बीचको भिन्नता
एक स्प्याम फिल्टर विशिष्ट फोल्डरहरूमा स्प्यामको रूपमा चिनो लगाइएको ईमेलहरू व्यवस्थित गर्न सक्दछ, जबकि स्प्याम अवरोधकले तपाईंलाई बेकार सन्देशहरू र छविहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ। यसको मतलव तपाईले श email्कास्पद ईमेल मेटाउनमा समय खर्च गर्नु आवश्यक पर्दैन किनकि ती स्पाम ब्लकरहरूसँग स्वचालित रूपमा मेटाइन्छ। त्यसकारण यो प्राय जसो वेबमास्टरहरू र व्यवसायीहरू द्वारा मनपराउँदछन् जो स्प्यामरहरूसँग डिल गर्न चाहँदैनन्।
एक स्पाम अवरोधक स्थापनाको फाइदाहरू
एक स्पाम अवरोधक स्थापना गर्न सजिलो छ, र तपाईं यसको सेटिंग्स बारम्बार परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। यसका साथै यसले तपाईंलाई अवस्थित ईमेल ठेगानाहरू स्थायी रूपमा बचत गर्न दिन्छ। जब यसले स्प्यामलाई मेटाउँछ, स्प्याम अवरोधकले तपाइँको समय बचत गर्दछ र अनावश्यक ईमेलहरूसँग व्यवहार गर्नबाट रोक्छ। तपाईं पनि भाइरसको जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ र एक व्यवसायीको रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
स्प्याम अवरोधकको मूल्य के हो?
स्प्याम ब्लकरहरूलाई प्रायः मासिक शुल्कको आवश्यक पर्दछ। लागत सुरक्षाको स्तर, यसको सुविधाहरू, र गुणहरूमा निर्भर गर्दछ। औसतमा, एक स्प्याम अवरोधकले तपाईलाई मासिक $ 00.०० देखि $ २$ सम्ममा केहि खर्च लाग्नेछ। धेरै सफ्ट्वेयर घरहरूले निःशुल्क सीमित सुविधाहरू र विकल्पहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई निःशुल्क स्प्याम ब्लकरहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन नि: शुल्क परीक्षणको प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं पन्ध्रदेखि तीस दिन सम्म नि: शुल्क स्पाम अवरोधक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस पछि तपाईंले शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
स्प्याम अवरोधकमा के खोज्ने?
उत्तम स्प्याम ब्लकरहरू प्रयोगकर्ताहरू द्वारा अनुकूलित छन्। यसको मुख्य सुविधाहरू मध्ये एक स्प्याम ईमेलहरू रोक्न र ब्लक गर्ने क्षमता हो। यदि तपाईंले एक स्पाम अवरोधक छनौट गर्नुभयो जसले अनावश्यक ईमेलहरू ब्लक गर्ने वाचा गर्दछ, तपाईंले सही छनौट गर्नुभयो। निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र तपाईंले प्रयोग गर्ने अनुप्रयोगहरू र सेवाहरू फिट गर्दछ।